Hokkara magaalaa Asallaa keessati uumameen namoonni – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHokkara magaalaa Asallaa keessati uumameen namoonni
Hokkara magaalaa Asallaa keessati uumameen namoonni miidhaman
Magaalaa Assallaa keessatti kaleessa [Roobii] hokkara uumameen namoonni 30 ol yoo miidhaman, 14 kan ta’an rasasaan dhahamu BBC’n hospitaala Asallaa irraa odeeffateera.
(bbc)—Dargaggeessi Kamaal jedhamu walitti bu’insa kana keessatti rasaasaan miilli isaa dhahame akka jedhutti, osoo masjiidaa galaa jirruu maasjiidni diigamuu irraan kan ka’een walitti bu’insi kun dhalate jedha.
Erga walitti bu’insi jabaataa dhufeen booda ammoo humni ittisaa gidduu seenee rasaasaan na rukute jedha Kamaal.
Doktorri Hospitaala Asallaa irraa akka maqaan isaanii hin himamne barbaadan tokko akka BBC’tti himanitti namoonni baay’een uleen, 14 ammoo rasaasaan rukkutamanii gara hospitaala isaanii dhaqaniiru.
“Dhaabni tokko isa tokkorratti hin dorgomu”
Barsiisaan Birrii miliyoona tokko dogoggoraan kennameef deebise
Warri rasaasaan rukkutamanis wallaansa baqaqsanii hodhuun taasifamaafii jiraachuus ibsaniiru.
Namoota miidhaman keessa ijoolleen umuriin isaanii ganna 14 ta’aniifi dubartiin akka keessatti argaman ibsanii, namoonni mada’aan tilmaamaan 36 ni ta’u jedhu.
Ka’umsa hokkara kanaa
Jiraata magaalaa Assalaa kan ta’an Obbo Gumaatoo Lenjisoo wanti uumame amantaa kan da’oo godhate ta’us, dhimmi rakkoon akka uumamu taasise waa’ee amantaa miti jedhu.
“Dhimmi dhimma amantiitii miti. Sochii ABIN’niitu jira naannoo kana. Isaanitus kaase, [inyaa ya ABIN daggaafiiwooch nan] jedhaa turan” jedhu Obbo Gumaatoon.
Walitti bu’iinsa uumame keessatti miidha kan geesise ammoo Raayya Ittisa Biyyaati jedhu.
“Namoonni gara masjiidaatti dheessaa osoo jiranii rasaasaan dhahamantu jira. kan uummata miidhe rasaasa [makkalaakayaadha].”
Hogganaan Poolisii Magaalaa Asallaa Komaandar Taaddasaa Shibbiruu garuu paartii ABIN jedhamu hin dhageenye jedhanii rakkoo bulchiinsa gaariifi gaaffii uummanni qabutu walitti bu’insa ture kanaaf ka’umsa ta’e jedhu.
Magaalaa Asallaa ganda Cilaaloo Zoonii ja’affaa keessatti uummanni lakkoofsaan 200-300 ta’u ganama barii bakka qullaa jiru tokko irratti mana masjiidaaf ijaaruuf walitti qabamuu himu komaandarichi.
Lafti kun kanaan dura eenyuuf akka kennamee ifatti wanti beekame hin turre kan jedhan Komaander Taaddasaan, qaamni gaafate jiraachuu garuu boodarra dhaga’uu ibsan.
Itti-gaafatamtuun Waajira Komunikeeshinii Bulchiinsa Magaalaa Asallaa Aadde Zeeynabaa Hajii akka jedhanitti ka’umsi walitti bu’insa kanaa bifa amantaa kan qabudha.
Lafa qullaa kanaan dura Masjiidaaf gaafatamaa ture irratti halkan manni ijaaramee bule. Sana mormuun Bataskaanni bakka sana irraa fageenyarra jiru Maariyaam jedhamu bilbila birmachiifannaa bilbilchiise jedhu.
Kaleessa ganama yeroo bilbilli naaf birmadhaa bataskaana sanaa dhagaa’amu namni kallattiin maaltu dhalate jedhanii gara bataskaanichaatti ulee guurratanii birmachaa turan jedhu aadde Zaynabaan.
Namoonni mana ijaaranii bulan ammoo bakkuma sana jiru ture, sanarraan walitti bu’iinsi uumamuu dubbatu.
Sochii qaamolee nageenyaa
Qaamni nageenyaa battalumatti qaqqabee tasgabeessuuf yaalus, lakkoofsi namoota dabalaa waan dhufeef rakkisaa ta’uu himu Komaandar Taaddasaan.
“Qaamni nageenyaa gidduu osoo jiruuyyu mana ijaaramaa ture sana diiguudhaaf yeroo yaalanitti dhagaa walitti daddarbachuun jalqabame.”
Walitti bu’insi akka hin uumamneef qaamoleen nageenyaa kan akka poolisii idilee, korri bittinneessaa, akkasumas dubbiin gara hamaatti kan deemaa jiru ta’uu erga hubatameen booda humni ittisaa gidduu galanii akka walitti hin buune dhorkaa ooluu ibsan.
Namoonni miidhaman dhakaa walitti darbachuudhaan, akkasumas uleedhaan kan miidhaman jiraachuu himanii hangamtu akka miidhame garuu gabaasa guutuu adda hin baafatiin jiraachuu dubbatu.
Eenyu akka kallattiidhaan hokkara kana keessatti hirmaatee fi qindeesse qorachuudhaaf itti deemaa jirra jedhu.
Himannaa humni ittisaa rasaasaan namoota rukkutaa ture jedhu ilaalchisee Komaander Taaddasaan, sagaleen rasaasaa dhaga’amaa akka ture amananii garuu namoonni rasaasaan dhahamuu adda hin baafanne jedhan.
Akka Komaander Taaddasaan jedhanitti haalli jiru amma tasgabbaa’eera. Namni ammatti adda bahee seeratti dhiyaate garuu hin jiru.
Sooma Ramadaanaa guyyaa sadiin dura rakkoon akkasii Asallaa keessatti akka uumamu Feesbuukiirratti barreeffamaa ture jedhu Aadde Zeeynabaan.
“Rakkoon hawwaasa gidduu osoo hin taane kan jiru namoonni akka rakkoon hawaaasa gidduutti uumamu hojjetaa jiran akka jiran nan hubadha.”
Kanaan dura walitti bu’insi bifa amantaa qabu Fulbaana 4, kan uumamee turerraan kan hafe wanti akkasii mudatee hin beeku jedhu.
Jeequmsi barii sa’aatii tokkorraa jalqabe hanga waaree boodaatti kan itti fufe ta’uu kan ibsan Aadde Zeeynabaan, dhakaan waajjira kantiibaatti darbatamaa akka tures himaniiru.
Godina Arsii Magaalaa Asallaa gochaa sukkannessa namoota 30 irratti midhaan qaqqabbeen namoota 14 rasasaandhahamaniiru BBC News Afaan Oromo gabaasaan nuti himeen har’aa ummanni Hiriraa gaggeessaa jira.